create your database | our notes for our youngers
Filed under: SQL Server 2005 — sevenlamp @ 10:24 AM
ကိုကျော်စွာရဲ့ cbox ထဲက မေးခွန်းလေးကို ဖြေပေးရင်းနဲ့ ကျွန်တော် SQL Server 2005 မှာ database တည်ဆောက်ပုံလေး ပြောပြပေးချင်ပါတယ်။ အရင်ဆုံး SQL Server 2005 ကို run ဖို့အတွက် START-> ALL PROGRAM -> MICROSOFT SQL SERVER 2005 -> SQL SERVER MANAGEMENT STUDIO ကို click လိုက်ပါ။ ဒါဆိုရင် sql server management studio ပွင့်လာပြီး database server login တောင်းပါလိမ့်မယ်။ server name နေရာမှာ ကျွန်တောတို့က ကိုယ့်စက်ကိုယ် ဖွင့်မှာဖြစ်လို့ computer name ဒါမှမဟုတ် local ဒါမှမဟုတ် (.) လေးထည့်ပေးရပါမယ်။ authentication အကောင့် အတွက်တော့ ၂ မျိုးရွေးလို့ရပါတယ်၊ window authentication နဲ့ ၀င်မယ်ဆိုရင် login name နဲ့ password ပေးစရာမလိုပါဘူး။ SQL Server Authentication နဲ့ ၀င်ရင်တော့ default login name က (sa) ပါ၊ password ကတော့ ကျွန်တော်တို့ SQL Server install လုပ်တုန်းက ပေးထားခဲ့တဲ့ password ကိုသုံးရပါမယ်။ တကယ်လို့ SQL Server install လုပ်တုန်းက မပေးခဲ့ဘူး ဆိုရင်တော့ window authentication ကိုပဲ ရွေးပြီး ၀င်လိုက်ပါ။
CategoryID int off
CategoryName varchar(50) on
very useful post.thank:)
Comment by Anonymous — October 9, 2009 @ 11:11 AM
Thanksalot for this site that posted all of these topics useful and help for my currently work place.
i will expect for another post to be better your site
I pray for happy and to be success in the future.
Comment by Nway73 — October 9, 2009 @ 11:38 AM
i want to know how to create this blog page at first and later as you may explain step by step. i amabeginner level about this programming fields. Thus i want to know most programming logic and i try the best as especially i can learn. i hope you may explain when i will ask any time.
Comment by Nway73 — October 9, 2009 @ 4:11 PM
to createablog like me, you just need to create an account at wordpress, and then need to choose ready made template from your Dashboards -> Appearance -> Themes.
Comment by sevenlamp — October 12, 2009 @ 9:35 AM
how about the variable type for
I haveastill-testing-asp.net-site
and it haveamember login form.
I want to store member data in local
If I got that database how can I connect these two things:local database and web app?
Comment by kevin — October 10, 2009 @ 11:25 PM
hi ko kevin,
i just use varchar(50) for password.
you can’t use local database from online application, to do like that you need to ask for database hosting.
Comment by sevenlamp — October 12, 2009 @ 9:43 AM
အကိုရေ ကျေးဇူး အထူးပါဗျာ
အရမ်းတတ်ချင်ပေမဲ့ သူများတွေလိုသင်တန်းတက်နိုင်တဲ့ အနေထားမဟုတ်
English လိုကကြောက် နဲ့
Comment by Mikozan — October 18, 2009 @ 4:18 PM
အစ်ကိုရေ ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ် ..အစ်ကိုဆီက စာတွေအားလုံး copy paste လုပ်သွားပြိးနော်..
Comment by သန္တာ — November 24, 2009 @ 1:50 PM
ကျွန်တော်လည်း အကြောင်းကြောင်းကြောင့် ဒီဘလော့ကို ပစ်ထားမိသလိုတောင် ဖြစ်သွားတယ်ဗျာ.. အားလုံးပဲတောင်းပန်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ကြိုးစားပြီး ဆက်ရေးပါဦးမယ်။
Comment by sevenlamp — November 26, 2009 @ 10:09 AM